Meziwanye njide onwe onye nke mmụta site na iji ngosipụta dị mfe - Ọzụzụ Nkụzi
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Meziwanye njikwa onwe onye nke mmụta site na iji ngosipụta dị mfe
Otu ihe na-ewetara ndị na-arụ ọrụ na ngalaba mmụta ihe ọfụma bụ na usoro na ụzọ kachasị dị irè anaghị adị mfe mmụta ma na-achọ ka onye ọkachamara na-elekọta ya ogologo oge. Ya mere odi otutu omume imirikiti nwa akwukwo ka imuta ihe omumu ka ewe buru nke ha.
Agbanyeghi na ọgụgụ isi na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ achọpụtala ọtụtụ ụzọ e si ekwe ha nkwa ọfụma iji melite arụmọrụ na agụmakwụkwọ, ihe akaebe gbasara itinye ha n'ọrụ na arụmọrụ ha ka pere oke.
Agbanyeghị, enwere usoro pụtara ihe dị oke mkpa ịmụ asụsụ ogologo oge: ọ bụ nweghachite ugboro ugboro nke ozi amụtara.; agbanyeghị, ikike ụmụ akwụkwọ nwere iji ya eme onwe ha, na-enweghị onye nlekọta ya, anabatabeghị ya. Kama nke ahụ, obere nyocha dị adị yiri ka ọ na-egosi na ụmụ akwụkwọ na-ahọrọ iji oge ha tinye usoro ndị ọzọ, dị ka oge ntụleghachi, kama icheta ihe a mụtara..
Malite n'ọmụmụ ihe gara aga, A ga-ahụta mmụta na-agbanwe agbanwe ma ọ dịkarịa ala, ị nwetaghachi atọ site na ebe nchekwa nke ozi a mụrụ. Dika okwuru, agbanyeghi, o doghi anya ma umu akwukwo nwere ike iji udiri atumatu a n’adabereghi etu ha nwere ike ha n’iru iji ya mee ihe. N'akụkụ a, Ariel na ndị ọrụ ibe wulitela ọmụmụ nke gụnyere nnwale abụọ iji zaa azịza ajụjụ abụọ a anyị kwuru n’elu.
Nchoputa mbu emere lebara ihe anya nyochaa na, site na ntuziaka ole na ole dị mfe, otu ụmụ akwụkwọ mahadum gaara enwe ike melite mmụta ha site n'itinye usoro nke mgbake mnemonic ugboro ugboro..
Na nnwale nke abụọ kama otu nyocha ahụ chọrọ nwalee ma emesia n’otu umu akwukwo a gha aga n’ihu n’eji otu Usoro n’onwe ya, nke ahụ bụ, na-enweghị ntuziaka ọzọ ma ọ bụ ịrịọ mpụga.
Ka anyị were otu ihe atụ nke mgbake mnemonic ugboro ugboro: ọ bụrụ na anyị ga-eburu ndepụta nke ịzụ ahịa n'isi; ndị mmadụ na-agụghachi ozi ahụ ruo mgbe ha nwere ike ịmeghachi ya nke ọma. Kama usoro a chọrọ ka, ozugbo echekwara, ndị mmadụ na-ekwugharị otu ozi ugboro atọ. Nke a kwesịrị ime ka ha kwụsie ike na ebe nchekwa karịa ihe ga-eme site na ịgabiga ha ọzọ site na gụghachi ndepụta ahụ.
Ka anyị gaa ugbu a hụ nnwale ndị nke ọ bụla na nsonaazụ ha gosipụtara.
E kenyere ụmụ akwụkwọ mahadum 30 ka ha depụta mkpụrụ okwu 20 nke Lithuania ka ha mụta. E kewara ụmụ akwụkwọ ahụ ụzọ abụọ:
A gwara ọkara nke ndị mmadụ ihe banyere ha mụọ ntụgharị nke okwu Lithuania, na-enweghị nkuzi ọ bụla, ka ịmụtanụ ọtụtụ o kwere mee.
Enyere ọkara ndị ọzọ sonyere ya otu ọrụ ma mgbakwunye na nkuzi: a gwara ha ka ha nwaa onwe ha ugboro ugboro ịlele ihe a na-echeta n'ezie bụ atụmatụ dị irè iji melite mmụta (e gosipụtara ha eserese iji kwado akụkọ a). Na omume, ozugbo ọhụụ amụrụ ọhụụ, a dụrụ ha ọdụ ka ọ dịkarịa ala ugboro atọ icheta ya tupu ha atụlee na ọ mụtara.
A nwalere ìgwè abụọ a mgbe nkeji iri anọ na ise gachara ka ha hụ ọtụtụ okwu ha mụrụ.
Nke mbu, Ntụziaka dị mfe enyere (icheta okwu ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ) ezuola iji nwekwuo ike na atụmatụ a ga-eji mee ya. Yabụ, ndị a tụụrụ aro atụmatụ ahụ mere ọtụtụ oge icheta okwu ndị a ga-amụ.
Ọzọkwa, dị ka a tụrụ anya ya, ndị jiri atụmatụ ahụ cheta ọtụtụ okwu Lithuania ọzọ atụnyere otu na anatabeghị aro banyere etu esi amụ ihe.
N’ikpeazụ, n’otu abụọ ahụ ọnụ ọgụgụ nke okwu amụtara ọtụtụ ihe na ọtụtụ nrụzigharị n'oge usoro ọmụmụ ahụ.
Na nchikota, usoro omumu ihe omumu putara ihe nke oma ma umu akwukwo jiri ya jiri ntuzi aka di obere.
Nnwale nke abụọ nwara ịza ajụjụ abụọ: iji ojiji nke ịmegharị ihe ugboro ugboro ga-eduga na ojiji ọ na-adịte aka? Themụ akwụkwọ ahụ ga - ekwupụta ihe ya na ihe ndị ọzọ iji mụta?
Iji zaa ajụjụ ndị a, ndị nchọpụta ahụ mere nnwale nke abụọ na otu mmadu. Usoro a yiri nnọọ nke nnwale nke mbụ mana site na ụfọdụ ọdịiche, e mekwara ya na nnọkọ abụọ: na nnọkọ nke mbụ, ha kwesịrị ịmụ okwu Lithuania ọhụrụ, na nnọkọ nke abụọ ha kwesịrị ịmụ okwu Swahili kama. Ihe dị ezigbo mkpa bụ na na nke a E nyeghịkwa ndị otu ọ bụla tụrụ aro banyere otu esi amụ ihe.
Iji bido, ndi mmadu na nnwale nke izizi natara aro ka ha jiri uzo mgbaghachighari nke ugboro ugboro gara n'ihu jiri uzo a jiri oge abuo a. nke ha anataghi uzo ọ bula.
Ọzọkwa na nke a, ndị jiri ụzọ mmụta ahụ a kpọtụrụ aha si na-amụta okwu ndị ọzọ.
Ọzọkwa, a na-eji atụmatụ ahụ ejiri aka oge ọ bụla ọbụlagodi mgbe agbanwere ozi a ga-amụta (site na Lithuania gaa Swahili).
Na njedebe, ọbụlagodi n'okwu a. ọnụ ọgụgụ nke okwu amụrụ ọnụ na ọnụ ọgụgụ nke nrụzigharị na ngalaba ọmụmụ.
Na mkpokọta, nyocha ahụ yiri ka ọ na-egosi na icheta ihe niile a mụrụ n’uche ugboro atọ ma ọ bụ karịa na-eme ka ikike ịmụ ihe kakwuo mma. Ọzọkwa, opekata mpe maka ndị okenye nọ mahadum Usoro a ga - adị ka etinyere ngwa ngwa na ntuziaka ole na ole, na-enweghị mkpa ọzụzụ pụrụ iche. Ya mere, imuta ya, o zuru ezu ikari ndi nile aghaghi iji ya.
Iwu iri nke ihe omumu ojoo
Kedu usoro ọmụmụ ihe kachasị dị irè?
Usoro iji meziwanye nghota nke ederede
Anyị enyela ndụmọdụ bara uru maka imewe atụmatụ
Otu esi eme (ma ghara ime) usoro: 6 ụzọ dị irè
Kedu usoro mmụta?
Ariel, R., & Karpicke, JD (2018). Meziwanye usoro nchịkwa nke na-achịkwa onwe ya na iweghachite omume mweghachi. Journal of Experimental Psychology: Itinye n'ọrụ, 24(1), 43.
Dunlosky, J., Rawson, KA, Marsh, EJ, Nathan, MJ, & Willingham, DT (2013). Meziwanye usoro mmụta nke ụmụ akwụkwọ site na usoro mmụta dị irè: Na-ekwe nkwa ntuziaka site na ọgụgụ isi na akụrụngwa agụmakwụkwọ. Science Sayensị na Mmasị Ọha, 14(1), 4-58.
Karpicke, JD (2009). Njikwa ikike na usoro nhọrọ nke Metacognitive: na-ekpebi ime nkwụghachi n'oge mmụta. Akwụkwọ akụkọ nke Psychology Experimental: General, 138(4), 469.
Karpicke, JD, Blunt, JR, Smith, MA, & Karpicke, SS (2014). Mmụta ịlaghachị azụ: Mkpa maka iweghachite ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ elementrị. Journal nke itinye nyocha na ebe nchekwa na cognition, 3(3), 198-206.
mụta nke ọma, mmụta, ncheta, imeghari ugboro ugboro
Meziwanye njikwa onwe onye nke mmụta site na iji ngosipụta dị mfe2020-05-162020-05-16http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/05/migliorare-lautoregolazione-dellapprendimento-con-una-semplice-indicazione.jpg200px200px
Ego ole ka ụmụ akwụkwọ kọleji nwere ADHD na-erite na ntụleghachi ọmụmụ ha?ADHD, Edemede